ओमिक्रोन भेरियन्ट कति खतरनाक ? डब्ल्यूएचओले भन्यो यस्तोNepalpana - Nepal's Digital Online
ओमिक्रोन भेरियन्ट कति खतरनाक ? डब्ल्यूएचओले भन्यो यस्तो
नेपालपाना मंसिर २२ २०७८
एजेन्सी। ओमिक्रोन अन्य भाइरस संस्करणहरुभन्दा खराब नभएको डब्ल्यूएचओ र अमेरिकाका शीर्ष वैज्ञानिकहरूले जानकारी दिएका छन् । तर ओमिक्रोन भेरियन्ट गम्भीरतालाई न्याय गर्न थप अनुसन्धान आवश्यकता रहेको बैज्ञानिकहरुको भनाइ रहेको छ ।
ओमिक्रोनको त्रासले कैयौ राष्ट्रहरूलाई सीमा प्रतिबन्धहरु पुनः लागू गर्न बाध्य तुल्यायो र आर्थिक रूपमा दण्डित तालाबन्दी फिर्ताको सम्भावना बढाएको छ । “प्रारम्भिक तथ्याङ्कले यो धेरै गम्भीर छ भन्ने संकेत गर्दैन । वास्तवमा, यदि केहि छ भने, दिशा कम गम्भीरता तिर छ,’ डब्लूएचओको आपतकालिन निर्देशक माइकल रायनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । यद्यपी थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । ‘हामीसँग अत्यधिक प्रभावकारी खोपहरू छन् जुन अहिलेसम्मका सबै भेरियन्टहरुविरुद्ध प्रभावकारी साबित भएका छन्,’ उनले भनेका छन् ।
शीर्ष अमेरिकी वैज्ञानिक एन्थोनी फौसीले डब्ल्यूएचओको दृष्टिकोणलाई प्रतिध्वनित गर्दै ओमिक्रोन प्रारम्भिक संकेतहरुको आधारमा अघिल्लो स्ट्रेन भन्दा खराब नदेखिएको र सम्भवतः हल्का भएको बताएका छन् । स्पष्ट रुपमा नयाँ संस्करण ओमिक्रोन डेल्टा भेरियन्टभन्दा धेरै ट्रान्समिसिबल भएको र वर्तमान रुपमा प्रमुख विश्वव्यापी तनाव विषय पनि यही भएको फौसीले एएफपीलाई बताएका छन् । यो लगभग निश्चित रुपमा डेल्टा भन्दा बढी गम्भीर नभएको उनले बताए ।
यसैबीच कोभिडविरुद्धका खोपहरूले नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई गम्भीर अवस्थामा पुग्नबाट जोगाउन सक्षम रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले जनाएको छ ।तर ओमिक्रोन भेरियन्टमा खोपको असर अन्य भेरियन्टको तुलनामा कम हुने कुनै सङ्केत नदेखिएको डब्ल्यूएचओका डा माइकल रायनले बताएका छन् ।
‘हामीसँग अत्यधिक प्रभावकारी खोपहरू छन् जुन गम्भीर रोग र अस्पताल पुर्‍याउने सन्दर्भमा हालसम्मका सबै भेरियन्टविरुद्ध प्रभावकारी देखिएका छन् । ओमिक्रोनविरुद्ध त्यस्तो नहुने आशा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’’ डब्ल्यूएचओका आपतकालीन कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक रायनले समाचार संस्था एएफपीलाई बताएका छन्।
मंसिर २२, २०७८ बुधवार २०:११:०९ बजे : प्रकाशित